नेपालबाट उडेकी महिला मनकुमारी दुवई विमानस्थलमा झर्दा अ’चानक कसरी भईन पुरुष ? (भिडियो सहित) — Imandarmedia.com
नेपालबाट उडेकी महिला मनकुमारी दुवई विमानस्थलमा झर्दा अ’चानक कसरी भईन पुरुष ? (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । नवलपुर जिल्ला’को रजहर’मा एउटा अनौठो घ’टना भएको छ । नवलपुरमा महिला रहेकी मन’कुमारी विदेश जान भने’र दुवई पुगेपछि उनी अचानक पुरुष बनिन् । जिल्ला प्रशासन का’र्यालयको लापर’वाहीका कारण अना’हकमा एउटा विपन्न परिवारको महि’लाले लाखौं रुपैया गुमाइन् ।